10 Goobaha Xeryaha Qoysaska Ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Goobaha Xeryaha Qoysaska Ee Yurub
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 12/03/2021)
Dooxada cagaaran ee cagaaran, aragtiyo waadi weyn, xeebaha, ama magaalooyin soo jiidasho leh, Yurub waxaa ka buuxa meelo cajaa’ib leh oo reeruhu u hoydaan. The 10 meelaha ugu fiican ee qoysaska laga dego ee ku yaal Yurub ayaa ku habboon fasaxa xagaaga, iyo xitaa jiilaalka. Dhammaantood waxay ku xeeran yihiin aragtiyo qurux badan iyo dabeecad, waxaana ugu muhiimsan ee loogu talagalay fasax qoys oo aan la ilaawi karin Yurub.
1. Meesha ugu Wanaagsan ee Kaamamka Qoysku Ka Gaaraan Austria: Tauren sare
Magaalooyinka u eg Fairytale, seeraha quruxsan, iyo buuraha Alps, ah park qaranka Hohe Tauren dushooda our 10 meelaha ugu fiican ee qoysaska laga dego Yurub. Tusaale ahaan, mid ka mid ah goobaha kaamam ee ugu wanaagsan aagga waa Grossglockner oo iska indhatira buurta caanka ah ee Grossglockner waana tan ugu sarreysa Austria.
Intaa waxaa dheer, Innergschloss ee Bariga Tirol waxay leedahay aragtida ugu quruxda badan Alps, markaa hubaal waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay riwaayadaha qoyska iyo sawirrada. Another Hohe Tauren highlight is the 600-year-old larch forest of Zedlach, halkaasoo aad ka heli doontid baro cajiiba oo loogu talagalay a dalxiis qoys.
Si aad u soo gabagabeyn, xero qoys ee Hohe Tauren park qaranka waxay u noqon doontaa waayo-aragnimo lama iloobaan ah qoyska oo dhan. Si aad uga wada dhigto wax walba, waxaad ku bilaabi kartaa fasaxaaga cagaaran Awstaria adoo ku safraya tareenka deegaanka ee saaxiibtinimo leh ee ICE.
2. Meesha ugu Wanaagsan ee Kaamamka Qoyska ee Faransiiska: Dooxada Dordogne
Dooxada quruxda badan ee Dordogne, Kaamamka Le Pontet wuxuu ku yaal wabiga Isle wuxuuna u dhow yahay quruxda badan ee loo yaqaan 'Perigord chateaux'. Le Pontet, waxaad ka heli doontaa xero qoys 3-xiddig oo cajaa'ib leh oo leh xero deegaan iyo kireysi guri guurguura. Sidaas, inta caruurtu ku buufinayaan harada, waad ku raaxeysan kartaa kalluumeysiga ama qorrax-qorraxda. Marka la barbardhigo, waxaad ku kori kartaa aragtida isla markaana aad u wada bogi kartaa dooxada Dordogne – Ku habboon sawirrada qoyska.
Xerada qoysaska ee Le Pontet waxay ku taal aagga quruxda badan ee Rhone-Alps, agagaarka Ardeche Gorges keydka dabiiciga. Sidaa darteed, waxaad heli doontaa waqti layaableh oo aad ku baadhid dabeecadda duurjoogta ah, waxqabadyo bannaanka u wanaagsan sida socodka iyo baaskiil wadista, oo si fudud u qoya qoraxda iyo hawo nadiif ah.
Mid ka mid ah Xeebaha quruxda badan ee Yurub, Ty Nadan oo ku taal Brittany waa meesha ugu fiican ee reeruhu ku hoydaan. Mid ka mid ah dusha sare ee goobta kaamka Ty Nadan ayaa ah in meeshu ay isku dhafan tahay dabeecadda iyo xeebta. Sidaa darteed, waxaad kala dooran kartaa inaad carruurtaada u kaxeyso dhinaca badda, dhidibada ciid u sameyso oo qorrax dhaca u fiirso, doon raacida ama geed fuulid. Goobtan degani waa mid caadi ah 20 daqiiqado xeebta Brittany.
Intaas waxaa sii dheer, the campsite is great for a family vacation with small children and babies. Thanks to a baby gear pack and kids’ madadaalo fiidkii. Sidaa darteed, hubaal waxaad kuheli doontaa waqti xero qoys lama iloobi ah oo kuyaala xeebaha caanka ah ee Brittany.
4. Meel Degitaanka Nederland: Gelderland
Hoyga ubaxyada ubaxa iyo Veluwe, Gelderland waa meel cajaa’ib leh oo reeruhu ku noolaadaan Nederland. Adiga iyo caruurtuba gabi ahaanba waad jeclaan doontaan jardiinada qaran ee Veluwe iyo duurjoogta, iyo 200 beeraha Appeltern.
Jutberg iyo Ackerstate waa uun 2 ka mid ah xeryaha badan ee ku yaal Gelderland, halkaas oo aad dhigan karto safarkaaga ama teendhadaada. Nederland waa meel aad u wanaagsan oo fasax qoys lagu aado, si sax ah maxaa yeelay waxaa jira baro badan oo qurux badan oo laga baaraandego dhallaanka ama socod baradka iyo xitaa dhalinyarada.
5. Kaamamka Qoyska ee ugu Fiican Bavaria Jarmalka
Hoyga webiga Danube iyo beeraha canabka ah ee Franconia, Bavaria waa meel aad u qurux badan oo qoysaska loogu tago. Kaliya qiyaasi inaad ka degayso safarkaaga ama teendhadaada, beeraha canabka ah, ka dib maalin ka mid ah riwaayadaha qoyska ee dabiiciga ah.
Baaskiil ku wadid ama ku warwareega Kaymaha Bavaria, raadinta duurjoogta, balanbaalis, iyo shimbiraha dhifka ah – Bavaria waa meel qurux badan oo xagaaga laga tago. Intaa waxaa dheer, waxaad ogaan doontaa in gobolku ka buuxo harooyin la yaab leh, Qalcadda Neuschwanstein ee loo yaqaan 'Knights' yar yar iyo amiirad, si loo dhameystiro fasaxa xagaaga ee qoyska.
6. Kaamamka Qoyska ee Kaymaha Madoow
Laga soo bilaabo isha shimbirta ama qoto dheer ee kaynta, keynta madow ee Jarmalka waa mid ka mid ah keydka dabiiciga ee ugu xiisaha iyo quruxda badan adduunka. Waxaad ka heli doontaa goobo badan oo kaamam ah oo ku yaal gobolka Black Forest tan iyo kaamku aad buu caan uga yahay Jarmalka.
Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa inaad dhigato safarkaaga meel u dhow magaalooyinkii qadiimiga ahaa, ama harooyinka quruxda badan iyo buuraha. Tusaale ahaan, Campingplatz Weiherhof by Titisee wuxuu ku habboon yahay nasashada nasashada qoyska, halka xero Wolfach ay ku habboon tahay socodka iyo baaskiilka qoyska.
7. Kaamamka Qoyska ee Tuscany Talyaaniga
Kaamamka ku yaal Tuscany waxay kuu noqon doontaa fasaxaaga qoyska ee ugu macaan. Buuraha cagaaran ee cagaaran, canab ah, farmaajo deegaanka, iyo gawaarida xamuulku waxay sameeyeen Tuscany samada samada. Waxa kale oo jira baastada iyo biisaska carruurta dabcan, halka waalidku ku raaxeysto suxuunta maxaliga ah ee badan.
Iyadoo tan maskaxda, Tuscany waxay u haysaa waxqabadyo badan oo xiiso leh qoyska oo dhan, sida barkadaha biyaha. Halkaan ayaad fadhiisan kartaa inta ay carruurtu biyaha ku buufinayaan, safaradaada maalinlaha ah kadib magaalooyinka u dhow, Pisa iyo Sienna.
Eray ahaan – fiican, Tuscany waa xero qoys oo aad u wanaagsan oo reer Yurub ah, jawharad kaambada qarsoon runtii.
8. Meesha ugu Wanaagsan ee Kaamamka Qoyska ee Switzerland: Xeebta Swiss Alpine
Kaamamka raaxada ama teendhadaada ama baabuurkaaga, Alps-ka Switzerland ayaa leh meelo ciribtirka yaab leh and budget-friendly family camping places. If you are planning family camping in the summer, markaa goobta xero Arolla ee ku taal Alps-ka Switzerland waa qumman tahay, mar haddii ay ku taal meel sare buuraha. Halkan waxaad ku yeelan doontaa views breathtaking, heerkulka qabow, iyo fara badan wadooyinka hortayada.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorbideyso khibrad nasasho badan, ka dib kaamamaynta harada dhinaceeda ayaa habboon. marka hore, hadday kulul tahay, waxaad ku boodi kartaa harada. Marka labaad, waxaad yeelan doontaa aragtiyo qurux badan, adoon aad uga fogaan xeradaada.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in buuraha Swiss ay bixiyaan meelo badan oo kaamam ah. Laga soo bilaabo nasasho ilaa fasax firfircoon, hareeraha hareeraha ama aragtida buuraha – Dhamaan waa yaab.
9. Meesha ugu Wanaagsan ee Reer Talyaani Lagu tago: Brione Campsite In Lake Garda
Madaxa harada Garda, 4-Xiddiga Camping Campion Brione waa meel riyo doon ah oo reer Talyaani ah. Ku soo jeeda aragtida harada, ku soo boodid dabaal, ama in aad qado u sameysid meel ka baxsan teendhadaada oo mid ka mid ah meelaha adduunka ugu fiican dhabarkaaga ku jira, waa habka ugu fiican ee qoyska loogu baashaalo.
Kaambada Brione ayaa leh 20 teendhooyin, iyo 39 guryaha guurguura ee kirada ah, korontada, iyo tas-hiilaadyo cajaa’ib leh, oo ay ku jiraan qolka ilmaha. Haddii qoyskaagu yahay midka firfircoon ee isboorti, markaa waad kireysan kartaa baaskiillo waxaadna safar ugu bixi kartaa harada iyo buuraha dhexdooda, ama ku raaxee ciyaaraha isboortiga. Dhanka kale, waxaad sidoo kale ku qaboojin kartaa barkadda ku taal xerada ama harada xeebteeda oo aad leedahay waqti nasasho qoys.
10. Goobaha Kaamamka Ee Yurub: Verdon Gorge
Geesaha Gorges du Verdon, dhalinyarada iyo xeryaha ku habboon carruurta, oo leh aragtiyo haro ama kaam xero xero qaali ah, xeraynta qoysaska ee Gorges du Verdon waligeed ma noqonin mid xiiso badan. Gorges du Verdon waa mid ka mid ah keydka dabiiciga ugu caansan adduunka, oo ku habboon xerada reerka xagaaga.
U mahadnaqida ay ugu dhowdahay harada iyo harooyinka, waxaa jira hawlo badan oo isboorti oo biyo ah oo loogu talagalay qoyska oo dhan. Tusaale ahaan, waxaa jira beero lagu nasto oo biyo leh iyo barkado kuyaal xeryaha badankood ee aagga, si aad ugu nasato barkadda agteeda. Isla mar ahaantaana, waxaad aadi kartaa sahaminta mid ka mid ah wadiiqooyinka tamashlaha ee cajiibka ah, keydka dabiiciga yaabka leh.
Isku soo wada duuboo – Kaliya baaritaankaaga Verdon Gorge kaamamaynta iyo ballansashada hore, maadaama meeshani ay tahay meel caan ku ah kaamaynta qoysaska, oo qarax baa kaa dhacaya.
Nice to Marseilles Tareen
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarkaaga 10 Meelaha ugu Wanaagsan ee Qoysku Kaamam Yihiin Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Meelaha Ugu Wanaagsan ee Qoysaska Kaamamka Ah ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3Dsoየሰማይ አካላት - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
kaamam CampingDestinations CampingDestinationsEurope Campingwithkids Familycamping Qoyska LuxuryCampingEurope teendhada